स्वास्थ्य लेख « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
जनस्वास्थ्य सरोकार । ब्रुफिन, डाइग्लोफेनेट जस्ता पेन किलर औषधिको लामो समयसम्मको सेवनले मिर्गौलामा हाइपरसेन्सिटीभिटी रियाक्सन गरेर एक्युट किड्नी इन्जुरीको समस्या ल्याउन सक्छ । बाथरोगमा लामो समयसम्म दुखाई कम गर्ने (पेनकिलर)
बम्बईबाट फर्केपछि मेरो नियुक्ति वीरमा नै भयो । म तृतीय श्रेणीको कर्मचारी थिएँ, जुनियर सर्जनको पद दिइयो, मेरो तलब १८० रुपियाँ थियो । डा. अन्जनी कुमार शर्मा सिनियर सर्जन हुनुहुन्थ्यो
डा. अनुप बास्तोला, सरूवा रोग विशेषज्ञ, टेकु अस्पताल अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या विगत ३ हप्ताको तुलनामा केही कम र स्थिर छ । वैशाखको पहिलो साता टेकु अस्पतालको इमर्जेन्सीमा जुन दरमा
कोरोना भाइरस संक्रमणले देश नै आक्रान्त बनिरहेको बेला कालो ढुसी ‘ब्ल्याक फगंस’ को संक्रमणले अर्को समस्या ल्याउने जोखिम बढाइरहेको छ । यसलाई म्यूकोरमाइकोसिस भनिन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा यो महामारीको
कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका लागि पुर्व तयारी गर्न सरकारसँग प्रशस्त समय थियो । तर पुर्व तयारीमा हामी चुक्यौँ । अब तेस्रो लहरका लागि हामी आफै तयार हुनुपर्छ । खोप नलगाएका
सानैमा ममी (आमा) को दूध खान मान्दैन थेँ रे । आमाको दूध बच्चाका लागि अमृत समान हुन्छ । तर आमाको दूध खान नमानेपछि जन्मेको एक महिनादेखि नै बजारमा सहजै प्राप्त
क्यान्सर रोग विश्वभरनै चिन्ताको विषय बनेको छ । व्यस्त जीवनशैली, कम शारीरिक परिश्रम, अस्वस्थकर खानपान र तनावपूर्ण जीवनशैली यसका प्रमुख कारक तत्वहरु हुन । स्वस्थकर, सन्तुलित, पोषिलो एवं वनस्पतिजन्य खानेकुरा
निःसन्तान उपचारमा दक्ष चिकित्सकको भूमिका
जनस्वास्थ्य सरोकार । ‘सन्तान नहुने दम्पत्तिले एकैचोटी टेष्टट्यूब बेबी गर्नुपर्दैन । यसको कारण हेरी साधारण उपचारबाट शुरु गर्नुपर्छ । केही नलागेपछि मात्र टेष्टट्यूब बेबीमा जानुपर्छ । तर यदि महिलाको दुवै